Myanmar Monk Student Association: February 2011
ထိုင်းနိူင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုမှ (MMSA)သို့ ဟင်းသီး ဟင်ရွက် လစဉ်လှူဒါန်း
ုထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော ဦးဖိုးကျော် ဇနီ ဒေါ်မသိတာ မိသားစု တို့မှာ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား နေ့စဉ်ဆွမ်းဘုန်းပေးရန်အလို့ငှာ လတိုင်းအပါတ်စဉ် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ငါး တို့ကို လှူဒါန်းနေပါကြောင်း MMSA ကျောင်းသားများအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ပြန်ကြားရေးမှူး on
ုထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော ခင်ဦး ဇနီ ဒေါ်လှလှဝင်းမိသားစု တို့မှာ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား နေ့စဉ်ဆွမ်းဘုန်းပေးရန်အလို့ငှာ လတိုင်းအပါတ်စဉ် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ငါး တို့ကို လှူဒါန်းနေပါကြောင်း MMSA ကျောင်းသားများအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
ထိုင်းနိူင်ငံချင်းမိုင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာကျောင်းသူလေ (MMSA)သို့ ငွေ နှင့် ဆန်လှူဒါန်း
ထိုင်းနိူင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တွက် Master ဘွဲ့ကို တက်ရောက်သင်ကြားနေသော (မွေးနေ့ရှင် မငုဝါ) မှာ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ထိုင်းဘတ်ငွေ (၅၀၀) နှင့် ဆန်များ ယနေ့ (၂၆.၂ ၂၀၁၁) နေ့တွင် (MMSA) မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့
MMSA ခေါ် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များမှလည်း ဒီနှစ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ (မငုဝါ)ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ (မငုဝါ)လိုချင်တာတွေပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျင်းကို နေ့စဉ် စားပေးလျှင် ကြွက်သား မျက်တာ သက်သာစေသည်တဲ့
ဂျင်းကို ဆေးမြီးတို အဖြစ်သုံးလာတာ၊ ရာစုတွေ တောင်လွန်ပါတော့မယ်။ ဂျင်းကို ဗိုက် မကောင်းရင်လည်း သုံးတာပါပဲ။ အအေးမိ ဖျားနာ တော့လည်း သုံးတာပါပဲ။ အခုတော့ ဂျေုာ့ဂျီယာ တက္ကသိုလ်က သုတေသီ တွေက လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် နာသွားတဲ့ (မျက်သွားတဲ့ ) ကြွက်သားတွေကို ဂျင်းနေစဉ် စားသုံးခြင်းဖြင့် သက်သာစေတာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ “ ကြွက်ကလေးတွေမှာ ဂျင်းကြောင့် အင်ဖလေ မေး ရှင်း (ရောင်ကိုင်းခြင်း) ကို သက်သာ စေတာကို တွေ့ထားပေမဲ့ လူတွေ အပေါ်မှာ ဂျင်းက ပေးနိုင်တဲ့ ကြွက်သား နာကျင်မှု လျော့ကျ စေတာကို တော့ ( ကြွက်သား ရောင်ကိုင်းမှု လျော့ကျလို့ ၊ ကြွက်သား နာ သက်သာ စေတာကို တော့) ၊ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရှာဖွေ ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ (အချို့သုတေသန တွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ) လို့ သုတေသီ ပက်ဒရစ်အိုကောနာနဲ့ အဖွဲ့ က ဆိုပါတယ်။ (အဲဒီ အဖွဲ့ မှာ အဖွဲ့ဝင်သုံးဦး ပါပါတယ်။) အခုသုတေသန မှာ ဘော်လန်တီယာ ၃၄ ဦးကို အပူပေးထားတဲ့ ဂျင်းစိမ်းပါ ကပ်ဆူး၊ နောက်ထပ် ဘော်လန်ဒီယာ ၄၀ ဦးကို အပူပေးထားတဲ့ ဂျင်းပါ ကပ်ဆူးတွေကို ၁၁ရက် သောက်စေပါတယ်။ နောက်တော့ ဘော်လန်င်္တီယာ အားလုံးကို (၇၄ ဦးလုံးကို ) အာနိသင်မဲ့ပစ္စည်းပါ ကပ်ဆူး ၁၁ ရက်ထပ်သောက် စေပါတယ်။ ကပ်ဆူးတစ်ခုမှာ ဂျင်းဒါမှ မဟုတ် အာနိသင်မဲ့ ပစ္စည်း နှစ်ဂရမ်စီ ပါပါတယ်။ သုတေသန ကာလ ရဲ့ ရှစ်ရက်မြောက် မှာဘော်လန်တီယာ တွေကို အလေးနဲ့ လက်ဆန့် ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ၁၈ ကြိမ် လုပ်ခိုင်းပြီး လက်မောင်း ကြွက်သားကို ဒဏ်ရစေ (မျက်စေ) ပါတယ်။ လက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှု ကြွက်သားတွေ ရောင်ကိုင်းမှု၊ အသား (ကြွက်သား) နာရင် ထွက်တတ်တဲ့ ဇီဝဓာတု ပစ္စည်း တွေကို လေ့ကျင့် ခန်းမလုပ်မီ နဲ့ လုပ်ပြီး သုံးရက်ကြားမှာ စိစစ်ရပါတယ်။ ခုသုတေသနအရ နေ့စဉ်ဂျင်း စားပေးလျှင် ကြွက်သား နာတာကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပြီး ဖြစ်စေတယ်။ စားရမယ့် ဂျင်းကို အပူ ပေးစရာမလိုဘူး ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိုကောနာက “စီးပွားရေး အရပဲ ပြောပြော ၊ လူမူရေး အရပဲ ပြောပြော၊ ကြွက်သား မျက်တာ အတော်ဆိုးတယ်၊ အဖြစ်လဲ များတယ် ။ သည်လို အဖြစ်ကို ခံစားဖူးသူတွေ ကတော့ အဲဒီအနာကို သက်သာမယ့် ဟာဆို ကြိုဆိုမှာပါပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။
သွေးစုနာ (ခ) မွေးကျွတ်နာအတွက်ဆေးနည်း
ကျွန်တော်၏ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းများကို အများဝေဒနာရှင်များ သိရှိကုသနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ လွန်ကဲ့ သော (၈) တန်းကျောင်းသားဘ၀လောက်ကပါ။ ကျွန်တော်၏ ဦးမင်းနှင့် အဒေါ်ရှိရာ မအူပင်မြို့နယ် ရေလဲကလေးကျေးရွာ သို့ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်၍ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ မအူပင်မှ ရေလဲကလေးသို့ ဒေါဂျစ်ကားစီး၍ သွားရပါသည်။ ကားမှာ သံဖင်ထိုင်ခုံဖြစ်ပြီး လမ်းကလည်း ဂ၀ံအတုံးကြီးများ ခင်းသည့်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အသွားအပြန် ဒီကားပဲစီးပြန်ရ၏။ အိမ်ပြန်ရောက်၍ သုံးရက်ကြာသော် တင်ပါးတစ်ပြင်လုံး တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး သွေးစုနာများ မရေနိုင်အောင်ပေါက်ပါသည်။ ဆေးမြီးတိုများ လိုက်မေးရာ ဆေးနည်းမှာ -
ပျားရည် (အစစ်) (၂) ကျပ်ခွဲသားခန့် (အနည်းငယ်စီ)။
၎င်းကို လက်ဝါးထဲထည့်ပြီး နယ်ပါ။ နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် ကျောက်ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်နယ်ပြီး အနာပေါ် အမြန်လူးပါ။ ချက်ချင်းခြောက်သွားပါသည်။ (၂) ခါလောက်လူးပါက နုလျှင်ပေါက်၊ ရင့်လျှင် မှည့်ပြီး ပြည်ပေါက်ပါသည်။ တစ်ပါးတွင် ဖြစ်ပါက ဖိထိုင်ပေးပါ။
အေ-အို (၉၀%) အခန့်
အကျင့်ကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့ တော်တော်ကို လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အတွဲလေး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာတော့ အိုသွေးများရင့် ပွင့်လင်းမှု၊ တက်ကြွမှုတွေက အေသွေးများရဲ့ အရောင်ကို
ဖုံးသွားတတ်တဲ့ အခါလည်း ရှိပါတယ်။
အေသွေးများ ပိုပြီး သဘောထားကြီးဘို့တော့ လိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ အေသွေးပိုင်ရှင်များက အိုသွေးပိုင်ရှင် လက်တွဲဖော်ကို အရမ်း သွက်လက်လွန်းတယ်လို့
အမြဲတမ်း အံ့သြစရာတွေနဲ့ ထူးဆန်းစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်တဲ့
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးတွေက အေသွေးပိုင်ရှင် ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ စိတ်ကို ပိုပြီးလွယ်လွယ်နဲ့
ချဉ်းကပ်နိုင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးများရဲ့ အမြင်မှာ အေသွေး ယောင်္ကျားလေးများဟာ
ထူးခြား ဆန်းကြယ်မှုကို အေသွေးပိုင်ရှင်များက နားလည် လက်ခံနိုင်တာကြောင့် အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု
ပိုများတတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာတော့ မီးနဲ့ တူတဲ့ အချစ်နဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်
မိန်းကလေးများက အေးဆေးပြီး ပုံမှန်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားများထက် ခေတ်ဆန်ပြီး သတ်သတ်ရပ်ရပ်
ထက်ထက်မျက်မျက် ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို ပိုပြီး နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း
ဒီလို အချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အေသွေးပိုင်ရှင်များနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေကများတာပါတဲ့။
•*♥*• မာန်ယုကျော် ( ရွှေဝမြေ )•*♥*•
အေသွေးပိုင်ရှင် နှင့်လိုက်ဖက်မည့်သူ . အေ-အေ (၇၀%) (အခန့် ၁)
ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ၇၀% ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဘော မတွေ့မှုလေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု
ရသွားပြီဆိုရင်တော့ ခွဲထားလို့ကို မရလောက်အောင် ရင်းနှီးသွားတတ်ပါတယ်။
.အကြိုက်ကလည်း တူသလို သူများတွေအမြင်မှာလည်း အဆင်ပြေတဲ့ အတွဲလို့ မြင်စေပါတယ်။ အကယ်၍ ချစ်ခင်စုံမက်လို့ လက်ထပ်ချင်တာကို မိဘတွေက သဘောမတူတာမျိုး ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တောထဲ တောင်ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး နှစ်ယောက်ထဲ လက်ထပ်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်လည်း ရှိကြပါတယ်။
အေသွေးအချင်းချင်းရဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းကတော့ စိတ်အချရဆုံးနဲ့
နှစ်ဦးခြားမှာ ရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း ကြာရှည်
ထိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ သတိထားစရာ လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို တစ်ယောက်က စပ်စုလွန်းလို့ မကြေနပ်မှုလေးတွေ ဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။
အေးသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်ခါ ချစ်ပြီဆိုရင် ဘယ်တော့မှ
အချင်းချင်း ချစ်မိပြီဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ အချစ်ကို ရမှာ အသေချာပါဘဲ။
ဘီသွေးဆိုရင်တော့ ဇနီးသည်ကို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပြီး အားလုံးကို
နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အေသွေး ယောင်္ကျားများကို ကြည့်ရင် အမြဲတမ်းလိုလို တွေ့နိုင်တဲ့ အေးစက်တည်ငြိမ်မှု အတွေးနက်နဲတဲ့ ပုံစံတွေက
ညှို့ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုက်ဖက်ညီမှုကတော့ ၂၅%ပဲ ရှိပါတယ်။
•*♥*• မာန်ယုကျော် ( ရွှေဝမြေ )•*♥*
အေသွေးပိုင်ရှင်များအကြောင်း သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ခန့်မှန်းလို့လည်း ရပါတယ်..ဒီနေ့တော့ သွေးအုပ်စု လေးမျိုးထဲက အေသွေ
ခန့်မှန်းလို့လည်း ရပါတယ်..ဒီနေ့တော့ သွေးအုပ်စု လေးမျိုးထဲက အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများကို
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ..
ငယ်စဉ်ဘ၀မှာတော့ သူတပါးကိုစဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိခဲ့ဘဲ ကိုယ်အတွက်ကိုသာ
သူတပါးကိုနောက်ပြောင်ရတာကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသတဲ့... ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့
အမျှ ငယ်စဉ်ကစရိုက်သဘာဝများက တဖြည်းဖြည်း ပြောက်ကွယ်သွားပြီး သူများတကာတွေ အံ့အားသင့်လောက်အောင်အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သူ ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့... အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကိုယ်လုပ်ရမည့်အရာအားလုံးကို တာဝန်သိစွာ လုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့... တခါတလေ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ မကောင်းတဲ့ အခါမှာ စိတ်လေလွင့်တတ်ပါတယ်တဲ့... အသစ်အဆန်းတွေကို
စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်တာထက် ကျင့်သားရနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း
ကျင်လည်ရတာကိုနှစ်သက်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း
အလျင်လိုတာမျိုး မရှိဘဲ အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ စတိုင်လ် ပါ... သပ်သပ်ရပ်ရပ်စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်တတ်သူများပါ... နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
လုပ်နေကြ အလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်နေတတ်လို့ အသစ်အဆန်းကို မရှိဘူးလို့ အပြောခံရတာကိုလည်း
ခံရတတ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး မဆို ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ပြတ်သားလွန်းတာကြောင့် မာဆတ်ဆတ်နိုင်တယ်... ဘုကြတယ် ဆိုပြီး အပြောခံရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်...
ပေါ်ပေါက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အလုပ် မှန်သမျှကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်တတ်ပေမယ့် စိတ်ရှုတ်လွယ်တဲ့
လူမျိုးတွေပါတဲ့... ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ လူတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံတတ်ပြီး သူတပါကို
သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လေး တစ်ခုပါတဲ့... ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရကို
တစ်နေရာမှာဘဲ မရှာဘဲ အားလပ်ရက်ကိုလည်း ခုံမင်တတ်ပါတယ်တဲ့... အားလပ်တဲ့ အခါမှာ လျှောက်လည်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်သလို လျှောက်လည်လို့ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်ကိုလည်း မနှမျောပါဘူးတဲ့...
တစ်ယောက်တည်း သီးသန့် ကမ္ဘာလေးကို တည်ဆောက်ချင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်... အထက်လူကြီးရဲ့
အဆူခံရတာမျိုးကို ခံပြီးပြီဆိုရင် မေ့လို့ မရဘဲ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားတတ်တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများရှိနေတတ်ပါတယ်...
ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါသကို ဖော်ပြလေ့မရှိတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု
ပိုများတာ ဖြစ်ပါတယ်...စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတာကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျနေရတဲ့ နေရက်တွေလည်း
ရှိတတ်ပါတယ်တဲ့... ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ထဲက မကြေနပ်ချက်လေးတွေကို တခါတလေ ဖော်ပြဘို့ လိုပါတယ်..
ရခဲလှသော ပုဂ္ဂိုလ် ၅-ဦး
(၄) တရားအတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံသူ။
(၅) တရားကို ဟောပြဆိုဆုံးမသူ။
၁။ ခမာဂုဏ်- မီးမပွားလောက်သည့် အမှုတို့၌ ပမာဏမပြုပဲ သီးခံခြင်း။
၂။ ဇာဂရိယဂုဏ်- သွားခြင်း၊ နေခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ၀တ်ခြင်း၊ စားခြင်း စသည်တို့၌ သတိပညာ ထပ်ကြပ်ပါခြင်း။
၃။ ဥဋ္ဌာနဂုဏ်- ခပ်သိမ်းသော အခွင့်တို့၌ ငယ်သူငယ်သားတို့ထက် ၂-ဆ၊ ၃-ဆ တက်၍ လုံ့လရှိခြင်း။
၄။ သံဝိဘာဂဂုဏ်- အလိုက်အထိုက်ကို ချင့်၍ ဝေဖန်ထုံးဖွဲ့ခြင်း။
၅။ ဒယာဂုဏ်- ငယ်သူငယ်သားတို့အား မိမိကဲ့သို့ သနားချစ်ခင် ကြင်နာခြင်း။
၆။ ဣက္ခဏဂုဏ်- အလုံးစုံသော အခွင့်အရေးတို့ကို တွေးမျှော်ဆင်ခြင်ခြင်း။
၁။ ဒါန- လှူဒါန်းခြင်း။
။ သီလ- ၅ ပါး၊ ၁၀ ပါး သီလ ဆောက်တည်ခြင်း။
၃။ ပရိစ္စာဂ- ပေးကမ်းချီးမြောက် ထောက်ပံ့ခြင်း။
၄။ အဇ္ဖ၀- စိတ်နှလုံး ဖြောင့်မတ်ခြင်း။
၅။ မဒ္ဒ၀- ကိုယ်နှုတ် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း။
၆။ တပ- ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်း။
၇။ အက္ကောဓန- ဒေါသမထွက်ခြင်း။
၈။ အ၀ိဟိံသ- တိုင်းသူပြည်သားများကို မညဉ်းဆဲခြင်း။
၉။ ခန္တီ- သီးခံခြင်း။
၁၀။ အ၀ိရောဓန- တိုင်းသူပြည်သားတို့နှင့် မဆန့်ကျင်ခြင်း။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ရင်တွင်းဖြစ်များ |
ထိုင်းနိူင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ရခိုင်မိသားစုမှ (MMSA)သို့ ဆွမ်း နှင့် ဆွမ်းဆန်လှူဒါန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ရခိုင်မိသားစုများဖြစ်ကြသော ကိုဝင်အောင်တို့က Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းပြီး ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁၅၀၀) နှင့် ညီမျှသော ဆန် (၁) အိပ်ကို ယနေ့ (၂၆.၂ .၂၀၁၁) နေ့တွင် (MMSA) မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့လှူဒါန်းလိုက်ပါ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်းနိူင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုမှ (MMSA)သို့ ဆန်လှူဒါန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော ဒေါ်မီမီတို့စုပေါင်း၍ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၆၀၀) နှင့် ညီမျှသေည ဆန်(၂)အိပ်ကို ယနေ့ (၂၂.၂ ၂၀၁၁) နေ့တွင် (MMSA) မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Thursday, 24 February 2011
IELTS ဖြေဆိုသူများအတွက် စာမေးပွဲအကြံပြုချက်များနှင့် သတိပြုရမည့်အချက်များ
Listening ပိုင်းတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ရံဖန်ရံခါ ယခင်စာမေးပွဲများမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မတူသောကြောင့် စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ ဂရုစိုက်၍ ဖတ်ရှုပါ။
- Speaker မှပြောနေသော အချက်အလက်များကို သေချာစွာ အာရုံစိုက်၍ ကြိုးစားနားထောင်ပါ။
- Score များများရရှိနိုင်ရန် အပိုင်း ၁နှင့် ၂ မှ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေဆိုပါ။ လွယ်ကူသောအပိုင်းများတွင် အမှားမပါအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
- တစ်ခါတစ်ရံတွင် သေးငယ်သည်ဟုထင်ရသော အမှားများကအမှတ်ကိုလျှော့စေနိုင်ပါသည်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအား သေချာစွာ ဂရုစိုက်၍ စစ်ပါ။
- Speaker မှ ပြောဆိုနေသော အချက်အလက်မှာ ခက်ခဲနေခြင်း သို့မဟုတ် မြန်နေပါက မကြောက်ပါနှင့်။ စိတ်အေးအေးထား၍ သေချာအာရုံစိုက်၍ နားထောင်ပါ။
- ဖတ်ခြင်း၊ ရေးခြင်း နှင့် နားထောင်ခြင်းတို့ကို တစ်ပြိုင်နက် ပြုလုပ်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသော်လည်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ။
- Listening အတွက် နောက်ဆုံးသတိပြု ရမည့်အချက်မှာ မေးခွန်းအားလုံးဖြေဆိုပါ။ ကွက်လပ်မထားခဲ့ပါနှင့်။
Reading အပိုင်းတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ
- မေးခွန်းတစ်ခုစီအတွက် အဖြေကို စဉ်စားရာ၌ အချိန်လွန်စွာမကြာသင့်ပါ။ မသေချာသောအဖြေကို မဖြေပဲထားခဲ့ပါ။ အခြားအဖြေအားလုံးကိုဖြေဆိုပြီးနောက် အချိန်ရပါက ကျန်ခဲ့သောအဖြေများကို ပြန်လည်ဖြေဆိုပါ။
- စာပိုဒ်၌ပေးထားသော အကြောင်းအရာကို မသိလျှင်စိတ်မပူပါနှင့်။ အဖြေအားလုံးစာပိုဒ်ထဲတွင်ပါပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင့်တွင် Specialist Knowledge ရှိရန်မလိုပါ။
- အဓိကသတိထားရမည်အချက်မှာ အဖြေတွင်ရေးရန် အချိန်ပိုရမည်မဟုတ်ပါ။ စာဖြေသူအများစုမှာ Listening ပိုင်း၌ အချိန်ရသလို Reading ပိုင်း၌ပါ အချိန်ရမည်ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော်မရပါ။
- စာမေးပွဲမဖြေဆိုသေးခင်ကာလ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း သို့မဟုတ် ဂျာနယ်များဖတ်ရှုခြင်းမှာ စာမေးပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- စာပိုဒ်များအား ဖွဲ့စည်းထားသောပုံစံကို သေချာလေ့လာပါ။
- ပေးထားသော အကြောင်းအရာအားစဖတ်ရာ၌ စာပိုဒ်၏ဆိုလိုချက်ကို ကြိုးစားခန့်မှန်းပါ။
- မိမိမသိသော စကားလုံးအား အချိန်ကုန်ခံ၍ မစဉ်းစားပါနှင့်။
- စာပိုဒ်တွင်အဖြေပါရှိပါက ထိုအဖြေအားကူးယူရာတွင် သေချာဂရုစိုက်၍ကူးယူပါ။
- စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအား သေချာစစ်ပါ။
- အဖြေတစ်ခုသာလိုအပ်လျှင် တစ်ခုသာဖြေဆိုပါ။ မလိုအပ်ပဲရှည်လျားစွာဖြေဆိုခြင်းကိုရှောင်ပါ။
- နောက်ဆုံးသတိထားရမည့်အချက်မှာသဒ္ဒါအသုံးပြုရာ၌ ဧကဝုဒ်၊ ဗဟုဝုဒ် (Plural/ Singular Noun) များကိုအထူးဂရုပြုပါ။
Writing ပိုင်းတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ
- (အဓိကစာကလုံး) Key Word များအားဝိုင်းပါ။
- တူညီသော အချက်အလက်များကို မတူညီသောစကားလုံးများဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲဖြေဆိုခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
- မေးထားသော အကြောင်းအရာမှ သွေဖီမသွားစေရန်ဂရုပြုပါ။
- Writing ဖြေဆိုမည့်အချိန်အား သေချာစွာ ဂရုပြုပါ။ Task Two တွင် အမှတ်ပိုရနိုင်သဖြင့် ဖြေဆိုရာတွင် အချိန်ပေး၍ဖြေဆိုပါ။ မလောပါနှင့်။
- စာပိုဒ်တစ်ခုစီတွင် ထင်မြင်ယူဆချက် စိတ်ကူးတခုအကြောင်းကိုသာ ဆွေနွေးခြင်းဖြင့် အမှတ်များများရနိုင်ပါသည်။
- IELTS Exam Format နှင့် မကိုက်ညီသော ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုရာ၌သုံးသော Informal Words ကိုအသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
- စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာ၌ မ်ိမိလက်ရေးနှင့် ရေးပါက စကားလုံး ၁၅ဝအား စာရွက်မည်မျှကုန်နိုင်မည်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းချေသိအောင်လုပ်ထားပါ။ စာမေးပွဲခန်းတွင် စကားလုံးရေတွက်ရန်အချိန်မလုံလောက်ပါ။
- Writing ပိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်ရာ၌ မိမိရေးထားသော Essay များကိုအချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ဖတ်ရှု ၍ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် စာကိုလျှင်မြန်စွာဖတ်ရှုနိုင်သည့်အရည်အချင်း (Skimming and Scanning Skill) ရှိရန်ပြင်ဆင်ထားပါ။
- မေးထားသောမေးခွန်းများအား အလွတ်ကျက်ထားသော စံပြအဖြေများဖြင့် ဖြေဆိုခြင်းအားရှောင်ကျဉ်ပါ။ Essay များကိုအလွတ်ကျက်၍ချရေးပါက မေးထားသော အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်လွဲတတ်၍ အမှားများတတ်ပါသည်။
- Speaking Test တွင် သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသာမက စကားပြောဆိုဟန်၊ အသံနေအသံထားစသော အချက်များကိုပါ အမှတ်ပေးပါသည်။
- စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ ဆရာ၊ဆရာမများသည် ကြိုတင်ကျက်မှတ်ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အလွတ်ပြောဆိုနေခြင်းအား ခွဲခြားသိနိုင်ရန်လေ့ကျင့်ထားသူများဖြစ်သဖြင့် အဖြေများအား ကြိုတင်အလွတ်ကျက်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
- မိမိပြောနေသောကြောင်းရာအားချဲ့နိုင်သမျှချဲ့ ၍ဖြေဆိုပါ။
- မိမိပြောရမည့် အကြောင်းရာအား ဆွေးနွေးရာ၌ စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ ဆရာ၊ဆရာမများထက် ပို၍ပြောဆိုပါ။ မေးသောအချက်ထက် ပို၍ချဲ့ထွင်ပြောဆိုပါ။
- စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူ ဆရာ၊ဆရာမ ပြောသောအချက်အားနားမလည်ပါက ပြန်မေးပါ။
- IELTS စာမေးပွဲသည် ဗဟုသုတကို ဆန်းစစ်သောစာမေးပွဲမဟုတ်သဖြင့် စံသတ်မှတ်ထားသောအဖြေတစ်ခုဟူ၍ မရှိပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအားဆွေးနွေးရာ၌ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုထည့်သွင်းဖြေဆိုခြင်းဖြင့် အမှတ်ကောင်းရနိုင်ပါသည်။
- Speaking Test ဖြေဆိုရာတွင် ချောမွေ့စေရန် မိမိအိမ်တွင်အသံသွင်း၍ ပြန်နားထောင်ခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ပါ။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ TOEFL အမေးအဖြေ |
Makha Bucha Day 2010 Festivals in thailand
များပါလေလဲ၊ တမွဲမွဲ နှင့်
တဝမ်းတစိတ် ညီစေသတည်း။ ။
လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါသက် ၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း။
အုန်းလက်ကြွေ ရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့ လာ။
အုန်းလက်ြွေကသူ့ နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။
နောက်တစ်ချီ ဒီတစ်လုံးက ၊ ဖုန်းလိုက်ပြန်ပါ။
မြုပ်လေပေါ့ ၊ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ။
တစ်လံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ချောင်းအဆွယ် ၊ မြောင်းငယ်ထဲက ၊ ဘဲထွက်လို့လာ။
ဘဲအုပ်မှာ တစ်ရာနှစ်ရာ ၊ မဗေဒါက တစ်ပင်ထဲ။
ဗေဒါပျံအံကိုခဲ ၊ ပန်းပန်လျက်ဘဲ။ ။
ကြား, မြင်, သုတ၊ ရှိပါစေ။
မြင်းမိုရ်ရွှေတောင်၊ မိဘ, ကြွေးကို
အဲဒါကြောင့် ပန်ကြ, ဆင်ကြ, (မင်္ဂလာ့) ပန်းခိုင်တွေ။
ဟိုတိုင်း ဒီပြည်၊ ရန်စစ်ခင်းလို့
နှင့်ပတ်သက်၍ ဟောကြားတော်မူ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးအိမ်၌ အလွန်ကျယ်
လုယက်သကဲ့သို့ ဆူညံလှချည်လားဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါသူဋ္ဌေးကြီးက မြတ်စွာဘုရား တပည့်
ဘုရား ကိုသော်မှလည်းအရိုအသေမပြု၊ အလေးအမြတ်မပြု၊မပူဇော်ပါဘုရား- ဟုလျှောက်ထားလေ
၁။ ၀ဓကသမာ-သူသတ်နှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၂။ စောရီသမာ-ခိုးသူနှင့်တုသော ဇနီးမယား။
၃။ အယျသမာ-အရှင်နှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၄။ မာတာသမာ-အမိနှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၅။ ဘဂိနီသမာ-အမ နှမနှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၆။ သခီသမာ-အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၇။ ဒါသီသမာ-ကျွန်မနှင့်တူသော ဇနီးမယား။
၁။ သူသတ်နှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည် အမျက်ဒေါသကြီး၏၊လင်ဖြစ်သူ ရှာဖွေပေးသော စီးပွားဥစ္စာကို မပျက်စီးရ
ထိုဇနီးမယားသည် သူသတ်နှင့်တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၂။ ခိုးသူနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည် အရှင်လင်ယောက်ျားအတတ်ပညာဖြင့် ရှာဖွေရရှိလာသော ပစ္စည်းဥစ္စာ၊
ကုန်သွယ်၍ရရှိလာသောပစ္စည်းဥစ္စာ၊လယ်လုပ်၍ရရှိလာသောပစ္စည်းဥစ္စာ အနည်းငယ်ကိုဖြစ်စေ၊ အများကိုဖြစ်စေအပြင်သို့ထုတ်ဆောင်ခိုးယူခြင်းငှါ အလိုရှိ၏။
ထိုဇနီးမယားသည် ခိုးသူနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၃။ အရှင်နှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည်အလုပ်အကိုင်လုပ်ဖို့ရန် အလိုမရှိ၊ ပျင်းရိ၏၊အစားလည်း ကြီး၏၊စိတ်လည်း ကြမ်း၏၊ကိုယ်အမူအရာလည်း ကြမ်း၏၊ကြမ်းတမ်းသော စကားကိုလည်း ပြောဆိုတတ်၏၊လုံ့လ၀ီရိ
ထိုဇနီးမယားသည် အရှင်နှင့်တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၄။ အမိနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည် အမိသည် သားကို အစဉ်စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ လင်ယောက်ျားကိုအခါခပ်
သိမ်းအစဉ်သနားကြင်နာ၍ စောင့်ရှောက်၏၊ လင်ယောက်ျား ဆည်းပူးရှာဖွေ၍ရရှိလာသောပစ္စည်း
ထိုဇနီးမယားသည်အမိနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၅။ အမ နှမ နှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည် အမကြီး နှမငယ်တို့သည် မောင်ဖြစ်သူ၌ ရိုသေသကဲ့သို့ ထို့အတူ မိမိလင်
ထိုဇနီးမယားသည် အမ နှမနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၆။ အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-အကြင်ဇနီးမယားသည်ဤလူ့လောက၌အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်အရပ်တပါး၌နေထိုင်၍ကြာမြင့်မှ
ထိုဇနီးမယားသည် အဆွေခင်ပွန်းနှင့် တူသော ဇနီးမယား ဖြစ်၏။
၇။ ကျွန်မနှင့်တူသော ဇနီးမယား ဟူသည်-
အကြင်ဇနီးမယားသည် လင်ယောက်ျားကတုတ်ကိုကိုင်၍ သတ်ပုတ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်အပ်သော်
လည်းထိတ်လန့်ခြင်းမရှိ၊ ဒေါသဖြင့် ပြစ်မှားလိုသောစိတ် မရှိ၊လင်ယောက်ျားကို သည်းခံ၏၊ အမျက်
ထွက်ခြင်းလည်း မရှိ၊ လင်ယောက်ျားအလိုသို့ လိုက်တတ်၏၊
လင်ယောက်ျားကို ရိုသေခြင်း မရှိကြကုန်၊
ထိုသုံးယောက်သော ဇနီးမယားတို့သည် ခန္ဓာပျက်၍ သေပြီးသည်မှ နောက်ကာလ၌ အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်ကြကုန်၏။
အမ နှမနှင့် တူကုန်၏၊
ထိုလေးယောက်သော ဇနီးမယားတို့သည် ခန္ဓာပျက်၍ သေပြီးသည်မှ နောက်ကာလ၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကြကုန်၏-ဟုမြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
သုဇာတာ ဤဇနီးမယား ၇-မျိုးတို့တွင် သင်သည် အဘယ်ဇနီးမယားမျိုး ဖြစ်သနည်း-ဟု မိန့်ကြား
ထိုအခါသုဇာတာ-က တပည့်တော်မကိုဤနေ့မှအစပြု၍ လင်ယောက်ျား၏ ကျွန်မနှင့် တူသောဇနီး
(၆) ဇာလဟတ္တပါဒ=ခြေချောင်းတော် လက်မတော်မှတစ်ပါး လက်ချောင်းတော်လေးခုစီ တညီတ
(၁၁) သုဝဏ္ဏ ၀ဏ္ဏ=ဇဗ္ဗူရာဇ်ရွေစင်ကဲ့သို့ပြေပြစ်ဝါ၀င်းသောအဆင်းအရေမြတ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ
(၁၄) ဥဒ္ဓဂ္ဂလောမ= သုံးကြိမ်လက်ယာရစ်လည်သည်၏အဆုံး၌တင့်တယ်တော်မူသောရွေမျက်နှာ
(၁၅) ဗြဟ္မုဇုဂတ္တ= ဗြဟ္မာမင်းကိုယ်ကဲ့သို့ခါးပုဆစ်ဒူးသုံးပါးသောအရပ်တို့၌ မကိုင်းမညွတ်ဖြောင့်
(၁၇) သီပုဗ္ဗဎုကာယ= ခြင်္သေ့မင်း၏ရှေ့ထက်ဝက်သောကိုယ်ကဲ့သို့ ပြည့်ဖြိုးကြီးမားခံ့ညားသော
ကျနော် အခုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်း အရာလေးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ဆိုတယ်.ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံတွေက ဘယ်လိုဆိုတာလေးကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်.. အရင်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်..ဆိုတာကို သေချာကွဲကွဲ ပြားပြား သိထားသင့်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည် အဘယ်နည်း … ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဟူသမျှ ဘုရားရှင်တော်မြတ် ဟောပြောဆုံးမတော်မူအပ်သော
ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမစကားတော်ဟူသမျှသည်… ဗုဒ္ဓဘာသာဟုခေါ်ပါသည်….. ၄င်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Buddhism or Buddha’s
Teaching ဟုဆိုသည်..ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည် သဘောပေါက်ပြီးလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသောဝေါဟာရ၏အနက်
အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း နားလည်ထားသင့်သည်… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဟူသော ဝေါဟာရနှင့် ထပ်တူညီသောပိဋကတ်စာပေ အသုံးအနှုန်းမှာ
ဥပါသကဆိုသော ဝေါဟာရပင်ဖြစ်သည်.. ဥပါသက၏ အဓိပ္ပါယ်မှာရတနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သူကိုဆိုသည်….
ဟု စိတ်တွင် သရဏဂုံ ဆောက်တည်ပြီးသူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်.. ဒီလောက်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို
သေချာ နားလည်သဘောပေါက် လောက်ပါပြီ… ကျနော်သရဏဂုံအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ် … သရဏဂုံမှာလည်း
နှစ်မျိုးရှိပါသည်.. လောကုတ္တရာသရဏဂုံ နှင့် လောကီသရဏဂုံဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားနိူင်သည် … လောကုတ္တရာ သရဏဂုံဆိုသည်မှာ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ် သူတော်စင်များ၏ ရတနာမြတ်သုံးပါးပေါ် မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်… လောကုတ္တရာ သရဏ
ဂုံတည်ပြီးသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ မည်သည့်အခါမျှ မဆုံးရှုံး နိူင်တော့ပါ လောကီသရဏဂုံတည်သူမှာကားအခြားဘာသာဝင်
အဖြစ်ခံယူသွားလျှင်ဖြစ်စေ ၊ ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်း သွားလျှင်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ ဆုံးရှုံးသွားနိူင်သည်. လောကီသရဏဂုံ
တည်သူများကိုလည်း ၄ မျိုးခွဲခြားထားပါသည်
(၁) ရတနာသုံးပါးကို မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ဆည်းကပ်သူ ။
(၄) ရတနာသုံးပါးကို ဆွေးမျိုးတော်၍ လည်းကောင်း ကြောက်၍သော်လည်းကောင်း လောကီအကျိုးစီးပွားအတွက် သော်လည်းကောင်း
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ လောက၌ အမြတ်ဆုံးဟု သဘောပိုက်ကာရိုသေမြတ်နိူး၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူများကိုလောကီ
သရဏဂုံတည်သူများဟုခေါ်ပါသည်…ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားသောတရား အဆုံးအမဒေသနာတော်တို့နှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း
မရှိသေးသော်လည်း ရတနာမြတ်သုံးပါးကို လောကတွင် အမြတ်ဆုံး ကိုးကွယ်ရာဟု ယုံကြည်ကိုးစားသော စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်ပင် ၄င်း
ပုဂ္ဂိုလ်သည် လောကီသရဏဂုံ တည်သွားပြီဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံထိုက်သွားပြီဖြစ်သည်… ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားက
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တို့အကြား အနှစ်သာရခြင်း ကွာခြားမှုကိုဒွန်းစဏ္ဍားနှင့်တူသော ဥပါသက(အောက်တန်း
(၅) သာသနာပ၌ အလှူခံရှာ၍ အလှူပေးခြင်းတို့ပင် ဖြစ်သည်
သေချာသုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဒွန်းစဏ္ဍားနှင့်တူသော ဥပါသက (အောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်) များသည်ရတနာမြတ်သုံးပါး အပေါ် မိမိ
အသိဥာဏ်ပညာနှင့်ယှဉ်သော ကြည်ညိုသဒ္ဓါစိတ်မရှိခြင်း ဗုဒ္ဓ၏လမ်းညွှန်အဆုံးအမများအပေါ် ယုံယုံကြည်ကြည် လိုက်နာလေ့မရှိခြင်း
ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုင်ရာဗုဒ္ဓ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ ပညတ်ချက်များကို မသိကျိုးကျွံပြု၍ အခွင့်သာတိုင်း ချိုးဖောက်
လေ့ရှိသည်.. မိမိကိုယ်ကိုသာ အားထားရာဆိုသော ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်ကို ကျောခိုင်းပြိး ဖြတ်လမ်းမှ ကြီးပွားမည့်နည်းကိုရှာကြသည်
ကြားရသောအသံ ၊ မြင်ရသော အဆင်းတို့ကို စွဲ၍ အတိတ်နမိတ်ကောက်ယူလေ့ ရှိသောအယူအဆများကို ယုံကြည်စွဲလမ်းသည် ဗေဒင်
ယတြာ ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင် ၊အတိတ်တဘောင် စသည်တို့ကိုအားကိုးသည်… မိမိစေတနာမှ ပေါက်ဖွားလာသော ကံ၏ အကျိုးပေးမှုကို
မယုံကြည်ပဲ မကောင်းသောစေတနာကိုမွေးပြီး ကောင်းသောရလဒ်ကိုသာ လိုချင်ကြသည် ။ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှ
သွေဖည်ယိမ်းယိုင်နေသည့် ကယ်တင်စောင်မနိူင်သည် ဆိုသူများကို အားကိုးတစ်ကြီး ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသည်သူရဿတီဘိုးတော်များ
သာသနာပမယ်တော်များ ၊ နတ်စာရင်းမ၀င်သော သုံးဆယ့်ခုနစ်မင်းနတ်များ ၊ ဗေဒင်ဆရာများ ထိုသူများကိုဆည်းကပ်လေ့ရှိကြသည်
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားခဲ့သည့် သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီလိုက်နာနေထိုင်ကျင့်ကြံရန်ကားစိတ်ကူး
ထဲပင် မထည့်ကြပင်…. ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်စုံသူများကိုမူ ပဒုမ္မာကြာနှင့်တူသော ဥပါသက( အထက်တန်းစား
(၃) လောကီမင်္ဂလာကို မပြုလုပ်ခြင်း ။
(၄) အကြား ၊အမြင်စသော လောကီမင်္ဂလာကို မယုံဘဲကံကိုသာ ယုံကြည်ခြင်း ။
သောကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမစကားတော်များနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လေ့ရှိကြသည်ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်သီလမြဲမြံသည်
မိမိဘ၀ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ပိုင် ကံ ၊ ဥာဏ် ၊ ၀ီရိယမှတစ်ပါးအခြားကိုးကွယ်ရာ မရှာတော့ပေ… မှန်ကန်စွာ ကျင့်ကြံ
မှန်ကန်စွာပြောဆိုပြီး ၊ မှန်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများဖြစ်သဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ ထိတ်လန့်ခြင်း ကြောက့်ရွံခြင်း မဖြစ်တော့ပေ
ထိုသူမျိုးသည် ပြဿဒါး ရက်ရာဇာ စသည့်တို့ကိုထည့်စဉ်းစား နေစရာမလိုတော့ပါ ။ထို့အတူဗေဒင် ၊ ယတြာ ၊ နတ်များ ၊ ဘိုးတော်
များကိုလည်း ကိုးကွယ် အားကိုးခြင်းမရှိတော့ပါ ။ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ တည်းဟူသော ရတနာမြတ်သုံးပါးကိုသာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်
လောက်ပါပြီ ။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟု အမည်ခံထားသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ အထက်တန်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလော
အောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလောဟုပြန်လည်ဆန်းစစ် ကြည့်သင့်ပေသည် ။ အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်လာအောင်
ဆရာဝင်းသိန်းဥိးရေးသားတဲ့ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓမဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ ဆိုသည့်စာအုပ်မှ ကိုးကားရေးသားပါသည်